Nhoroondo Uye Shanduko Yemawicheya | Karman® Mawiricheya
Ngatinyatso tarisei kuti mipiro yakakonzera shanduko inozivikanwa ye mavhiripu? Mawiricheya kwete chete kugadzirisa iyo unhu yehupenyu hwevashandisi vavo asiwo kusimudzira yavo kufamba. Inovagonesa kuita zviitiko zvemagariro uye nekuvandudza yavo hutano hwepanyama. Chii chakaitika mukushanduka kwe mavhiripu? Verenga zvimwe pane chii Karman yaunza patafura. Ngatitarisei iyi yakasarudzika nhoroondo uye shanduko.
Uye zvakare, funga nezve izvi kwechinguvana uye fungidzira, ko dai pasina mavhiripu? Izvi zvinofanirwa kuve zvechokwadi kana tikadzokera kunguva iyo sachigaro mavhiri akatanga kugadzirwa. Ikoko kunoratidzika kunge kusina chaiko murandu kugadzirwa chaiko kweiyo wiricheya.
Tarisa uone WW2 yedu nguva wiricheya munzvimbo yekutandarira kana iwe ukatishanyira!
nhasi, mavhiripu zvinoshandiswa zvinobudirira pasirese senzvimbo yekurapa yekurapa. Unogona kuvaona muzvipatara. Isu tinoita kunge tiri kuvaona zvakanyanya munzvimbo dzekurebesa. Kwete zvakanyanya mumigwagwa kunyangwe isu tiine hurema hwakawanda kufambidzana nzvimbo dzekuenda.
Unoda kuziva zvakawanda nezve mavhiripu? Ngatitangei nenhoroondo yayo uye shanduko. Apa ndipo patinopinda mukutarisisa kwezvinhu. Ngatitorei tichinyatso tarisa kumashure munguva.
Nhoroondo Ya mavhiripu:
Zvakangodaro, pane kusava nechokwadi nezve kugadzirwa kwe mavhiripu uye muvambi wayo wekutanga. Dzimwe nyanzvi dzinopokana kuti nhoroondo ye Wiricheya inotanga pakati pezana ramakore rechina nerechitanhatu.
Naizvozvo, zvinyorwa zvekutanga zve mavhiripu akawanikwa mu China. KuChina, mavhiri akashandiswa kufambisa vanhu uye rinorema zvinhu. Ino inguva yezvigadzirwa zvekutora zvinhu kubva kune imwe nzvimbo uchienda kune imwe. kushandisa icho chishandiso chekufambisa matombo uye chimwe chivakwa zvinhu. Izvo zvinogona kuwanikwa kuti vanhu vaishandiswa kutamiswa futi. Asi kwete chaizvo semota. Kana a kutakura. Asi zvimwe zvezvinhu. Hazvinyatsonzwisisike kana vanhu vaive vekutanga.
Gore uye zvakadzama
1595: Wekutanga kuzivikanwa wiricheya, kunyanya yakagadzirirwa kuremara, yainzi "chigaro chisingabatsiri." Imwe isingazivikanwe mugadziri akaigadzira muna 1959 kuna King Phillip II, aive Mambo weSpain. Chaive cheya chembere ine zvigaro zviviri, uye zororo remakumbo.
1655: Kutanga muna1655, pakanga paine remara mugadziri, Stephan Farffler, kuGerman. Pazera remakore makumi maviri nemaviri, akagadzira cheya iye, anozivikanwa seyekutanga kuzvifambisa wiricheya. Kugadzirwa kwechigaro ichi yaive nhanho huru yakanangana nekushanduka kwe mavhiripu, kunyange zvaive zvinorema uye zvakaoma kusunda.
1783: Kubva muna 1783, “bhati wiricheya”Yakagadzirwa naJohn Dawson. Chigaro ichi chakatumidzwa zita reguta reBhati. Yakanga yakagadzirwa nemavhiri makuru maviri uye vhiri rimwe diki. Ichi chigaro chaive chigaro chakakurumbira kwazvo muzana ramakore rechi19.
Mukuzorora, zana ramakore rechi19, panguva yeindasitiri chimurenga, dzakawanda kuchinja akagadzirwa kune wiricheya kupa humwe hunyaradzo sezvo bhaidhi-cheya rakanga risina kugadzikana. Izvo zvakagadziridzwa chair dzakada kufanana nezvigaro zvinoshandiswa nhasi mataira erabha nesimbi dzakasimba.
1932: Muna 1932, mainjiniya, Harry Jennings, akaunza “kupeta wiricheya. ” Akagadzira ichi chigaro chake remara shamwari, Herbert Everest. Gare gare, muna 1933, ivo vaviri vakatanga kambani, Everest & Jennings. Vakagadzira kuvandudzwa kwakawanda mu wiricheya kugadzirisa mashandiro ayo ese.
1950: Pashure peHondo Yenyika II, pakanga pane kudikanwa kukuru kwe mavhiripu kune varwi vakakuvadzwa. Muna 1952, mainjiniya, George Klein, akacherekedza kudikanwa kwechigaro chemagetsi ndokugadzira icho pamwe nechikwata chake cheinjiniya. Iye yakagadziridzwa kukura uye kurema kweiyo mavhiripu. Kubudikidza neizvi, iyo nguva yesimba mavhiripu akatanga.
Ngatizviputsei izvozvi pane shanduko dze mavhiripu neboka
Dzazvino Kuvandudza - Sachigaro Akangwara: Uku zvirokwazvo kushanduka kwe mavhiripu. A smart wiricheya inounganidza data pamusoro pehunhu hwevatyairi uye kudyidzana kwavo nezvakatipoteredza. Simba iri mavhiripu yakawedzera rusununguko rwemushandisi wayo.
Iko kushanduka kwe mavhiripu heino rakapetwa simba basa
Mazuva Ano Mawiricheya Inowanikwa Nhasi:
Zvese-Terrain Mawiricheya - Izvi mawiricheya regai mushandisi pinda mumvura. Zvese-Terrain mawiricheya zvakare ipa yakakura kufamba panzvimbo isina kuenzana pamwe nemumahombekombe. Macheya aya ane mamwe mavhiri akapamhama kuitira kuti simbisa kugadzikana panzvimbo isina kugadzikana.
Nekuda kweizvozvo, kune akasiyana mamodheru enzvimbo mavhiripu inowanikwa, iyo inosanganisira manyore uye bhatiri-inofambiswa. Macheya aya anowanikwa nenzira dzakasiyana uye zvimiro.
Electric mavhiripu - An wiricheya yemagetsi iri nyore kushandisa uye zvakare akareruka huremu. It inopa kukuru kunyaradza mushandisi nekudzivirira kuneta.
Ndiyo mhando inozivikanwa kwazvo ye mavhiripu, kure kure. Macheya aya anodhura kupfuura mamwe marudzi akasiyana-siyana yemacheya asi akakosha mubhadharo!
S-ERGO ATX KUSHANDA KWEVHANGERI
mutambo Mawiricheya - Mitambo mavhiripu hazvisi zvekushandisa mazuva ese uye ndizvo akaita zvekureruka zvinhu. Izvi zvinoshandiswa ne remara vatambi vemimwe mitambo, senge yakaoma nzvimbo nenzira yemugwagwa.
Several mitambo mawiricheya zviripo zvemitambo yakasiyana, kusanganisira tenesi wiricheya, kumhanya wiricheya, handcycle, uye mitambo yakajairika wiricheya.
kufamba Scooters - Izvi ndizvo mhando of mavhiripu, inonziwo magetsi anoshanda nemagetsi. Scooter aya ndeeavo vasingakwanise kufamba nzendo refu nekuda kwe kuremara kana chero imwe nyaya yehutano.
Uyezve, kufamba Scooter ane zvigaro zvinoshandurwa pakukwirira. Ruzhinji rwe kufamba scooter ari nyore kushandisa uye kushandisa. Vamwe vanogona kupeta. Vanhu vanotovaita otomatiki. Saka zvinoenderana nemabasa. Asi nyanga nemwenje dzimwe nguva zvine mwero uye zvimwe ndezvokusarudza.
Uyezve, Unogona zvakare kutora yako kufamba sikuta pazororo newe sezvo iine iyo kugona kutorwa paruzhinji senga Network. Vanhu vanovatora mumabhazi, kuenda kumapaki ekuvaraidza uye chero kupi chaizvo chaiko. Iye zvino vamwe vanhu vanonyatsovimba nemagetsi sikuta uye nemacheya ekufamba. Iine maEV anozivikanwa emota, vanhu chaizvo vari kutanga kugamuchira uye kutora izvi. Tekinoroji yebheteri ine chaizvo yakagadziridzwa. Izvi zvinopfuudzwa kuvanhu.
Kumira Wiricheya - Izvi mavhiripu ndiwo anonyanya kufadza uye anoshanda. Uku ndiko kunakidza kushanduka kwe mavhiripu izvozvo zvinonyanya kuzivikanwa muzana ramakore rechi21. Chokwadi tilt, kutsenhama, uye simba ELR mabasa anoshandura maitiro ese ekushanduka. Kazhinji, wiricheya vashandisi vanopedza yakawanda yenguva yavo vagere, izvo zvinokanganisa hutano hwavo.
Mukuwedzera, izvi mawiricheya anowedzera chivimbo chevashandisi nekuvaita kuti vakwanise kutarisana nevanhu. Vakamira mawiricheya zvakare kugadzirisa basa rekufema, uye nekudaro, inova isinganetsi kufema. Basa redundira remushandisi zvakare inovandudza ndakamira.
izvi vakamira mawiricheya vane zvimwe zvakawanda zvinobatsira, iyo inosanganisira:
Kuwedzerwa kwemafupa emapfupa
2. Kuderedza tsandanyama spasticity
3. Inosimudzira Utano Hweganda
4. Yakagadziriswa kufema
5. Inodzivirira Tight tsandanyama
6. Deredza Kuneta
7. Kuwedzera Kuziva
8. Deredza Kushungurudzika
Kubva muzana rino ramakore, kukura kukuru zvanga zva akaita mune tekinoroji, zvichizoratidza mukati mavhiripu. Zvino, simba mavhiripu irikuitwa nechimuti chedanda, mudanda, uye zvimwe zvishandiso. Vamwe vanotova nekushambadzira uye kunyangwe ekuronda masystem. Vamwe vane pulse sensing uye hutano metres iyo inogona kutumira iwo ruzivo kuna chiremba wako kana mudiwa. Kune zvakawanda zvakagadzirwa uye zvitsva zviri kuitika nekukurumidza kumhanya.
Mukuwedzera, the kupuruvha in mavhiripu haina kungowedzera chete dzakasiyana siyana dzesarudzo asi zvakare yakawedzera iyo kufamba yevanhu vakaremara. kufamba uye hutano. Iyo zvinobatsira inogona kuyerwa chete nenguva. Iyi shanduko ye mavhiripu icharamba ichikurumidza. Nemakomputa achigadzirisa nekukurumidza kumhanya, mumwe aigona kungofungidzira izvo izvo gumi rinotevera zvichaunza kwatiri.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, mavhiripu.